Aljeeriya: kanaalka M6 waa la mamnuucay ka dib dokumentari - teles relay
Aljeeriya: M6 channel ayaa la mamnuucay ka dib markii la sameeyay dukumiinti
By Chinde On Sep 30, 2020
Wasaaradda Isgaarsiinta Aljeeriya waxay go'aansatay in aysan "mar dambe u oggolaan" telefishanka gaarka loo leeyahay ee Faransiiska ee M6 in uu ka hawlgalo Algeria, maalin ka dib markii la baahiyay dokumenti dokumenti ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa dibad baxa "Hirak" ee dalkaas.
Bayaan la sii daayay fiidnimadii Isniinta, Wasaaradda Isgaarsiinta waxay ku eedeysay dokumenterigan - oo cinwaan looga dhigay "Aljeeriya, waa waddanka kacdoon wada" - ee Hiraak fiiri eex iyo inay soo saareen koox qalabaysan "Ogolaansho toogasho been ah".
"Hordhacani wuxuu nagu hogaaminayaa inaan go'aansano inaanan mar dambe loo oggolaan M6 inay ka shaqeyso Algeria, nooc kasta ha noqotee", ayaa leh wasaaradda.
Lagu soo bandhigay qayb ka mid ah bandhigga "Baaritaan gaar ah", Warbixintan oo 75 daqiiqo socotey - ayaa lagu duubay mararka qaarkood "Kaamirooyinka caqliga leh" - wuxuu soo bandhigayaa markhaatiyada seddex dhalinyaro Algeria ah oo ku saabsan mustaqbalka dalkooda, oo ku jira kacdoon aan horay loo arag tan iyo Febraayo 2019.
Dhibaatada caafimaad ayaa horseeday hakinta suuqa "Hirak" bartamihii bishii Maarso. Wasaaradda Isgaarsiinta ayaa ceebeysay "Markhaati aan dhadhamin", ee "Erayada ugu dhimista badan" et "Isugeyn sheeko xariir ah oo aan qoto dheer lahayn".
sida ay Aljeeriya u doonayso inay u badbaadiso noocyadan halista ku jira - Jeune Afrique
“Wadamada Afrika waxay leeyihiin dhamaan awooda ay ku hogaamin karaan…
Mid ka mid ah halyeeyada baaritaanka, Noor, YouTuber oo loo yaqaan Algeria, ayaa ku sharaxday shabakadaha bulshada Isniinta inay ka qoomameyso ka qeybgalka dukumintiga oo ay ka xumaatay. "Xirfad la'aan" kanaalka Faransiiska.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Algeria, "Weriye Franco-Algerian ah wuxuu hubiyay soo saarista filimka, isagoo gacan ka helaya" wax hagaajiya Aljeeriya ", oo la siiyay ruqsad been ah oo toogasho ah", gef "weliba si xun loo ciqaabay".
Wasaaraddu waxay ballanqaadaysaa inay tallaabo sharci ah ka qaadi doonto wariyaasha "Been abuur ku qoran qoraal sax ah ama mid guud". waxaa "Maaha wax kadis ah in warbaahintani loo qalabeeyay inay fuliso ajande loogu talagalay in lagu xumeeyo sumcadda Aljeeriya iyo in la jebiyo kalsoonida aan kala leexan ee u dhaxaysa dadka reer Algeria iyo hay'adahooda, waxay ku dhaqmaan riwaayad iyo heerar kala duwan iyo taageerooyin, ayuu yidhi.
Sida laga soo xigtay wasaaradda, M6 waxay soo gudbisay, 6dii Maarso, 2020, codsi aqoonsi saxaafadeed oo loogu talagalay xubnaha kooxda bandhigga. "Baaritaan gaar ah", ee toogashada dukumiinti ku saabsan "Dhiirrigelinta horumarka dhaqaale iyo dalxiis ee magaalada Oran, iyo sidoo kale dhaqamada kala duwan ee ka dhigaya hodanka dalkeenna".
Codsiga oo jawaab aan fiicnayn ka helay adeegyada wasaaradaha isgaarsiinta iyo arrimaha dibedda, ayuu yidhi. Waxaa la sii daayay bishii May ee la soo dhaafay kanaalka guud ee Faransiiska 5 ee dukumiinti kale oo ku saabsan dhalinyarada Algeria iyo "Hirak" -
"Algeria jaceylkeyga" Waxaa qoray wariye Faransiis ah iyo agaasimaha asal ahaan reer Algeria Mustapha Kessous - wuxuu dhaliyay xiisad diblomaasiyadeed oo u dhexeysa Algiers iyo Paris.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore: https://onvoitout.com/
Markab badda ku lumay, markab ka duulaya Hawaii ayaa u duulay Filibiin
Ep 75. Maaskarada wajiga, Kubadda Cagta culus iyo Birta culus ee Johnny Depp ee lumay - Video
"Wadamada Afrika waxay leeyihiin dhamaan awooda ay ku fuliyaan talaalada tirada badan" -…
'Waan Kajawaabay Wicitaankii Madaxweynaheyga': Mudaaharaadayaashu Waxay Yihiin Trump Wuu Ku Baaqay - Cusub…